के तपाईं असल शिक्षक बन्न सक्नुभएको छ ? शिक्षकको वास्तविक अर्थ के हो ? — Bhaktapurpost.com
शिक्षक शब्द अंग्रेजी टिचर शब्दको नेपाली अनुवाद जस्तै प्रतीत हुन्छ । अर्थात्, यस्तो मान्छे जसले शिक्षण कार्य गर्ने गर्छ । सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियालाई सहजता साथै विशेषज्ञताका साथ गर्छ । नेपालमा शिक्षकका लागि गुरू शब्दको प्रयोग प्राचीन कालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ । गुरू शब्दको शाब्दिक अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण यानि जो हामीलाई जीवनको सम्पूर्णतालाई हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्नका लागि हाम्रो पथ ओलोकित गर्ने गर्दछन् । २१ शताब्दीमा शिक्षामा अनेकन परिवर्तन र सुधारहरु आएका छन् । तर, मानवीय सम्पर्क तथा दुईतर्फी संवादको भुमिका समयको साथ अझै धेरै प्रासंगिक हुँदै हामी सामु आइरहेको छ ।